कोरोनासँग लड्न बुस्टर डोजको आवश्यकता कहिलेसम्म? – Health Post Nepal
कोरोनासँग लड्न बुस्टर डोजको आवश्यकता कहिलेसम्म?
२०७८ फागुन १२ गते १३:२५
काठमाडौं – विगत दुई वर्षमा विश्वभरका मानिसहरूले कोरोनाभाइरससँगै अब बाँच्न सिकिसकेका छन् र भाइरसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने समस्याहरूप्रति पनि सचेत भइसकेका छन्। साथै यससँग लड्न थुप्रै उपायहरु पनि फेला पारिसकेका छन्।
तर मानिसहरूमा अहिले प्रयोगमा आइरहेका खोपले कहिलेसम्म काम गर्छ भन्ने जिज्ञासा बढ्दै गएको छ। बुस्टर डोजले कहिले सम्म काम गर्छ, के यो पटक-पटक लगाइरहनु पर्ने हो? भन्ने कुराले उनीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ।
थुप्रै अध्ययनहरुले देखाएका छन् कि भ्याक्सिनको तीन डोज वा दुईले पनि तपाईंलाई गम्भीर बिमारी र लामो समय सम्म संक्रमित हुनबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम छ। युनिवर्सिटी अफ पेन्सलवेनियाका इन्स्टिट्युट फर इम्युनोलजीका डायरेक्टर जोन वेरीले अब थप डोजको संख्याको कमीतर्फ अर्थात बुस्टर डोज घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। तर जसको उमेर ६५ वर्षभन्दा बढी छ र जो संक्रमणको उच्च जोखिममा छ उसलाई भने चौथो डोजले लाभ दिनसक्ने वेरीले बताए।
जो बाइडेन प्रशासनको कोभिडका शीर्ष अधिकारी तथा फेडरल हेल्थ अफिशियल डा. एन्थनी फौसीले पनि बिनाकुनै गम्भीर समस्या चौथो डोजलाई सिफारिश नदिने बताए।
ओमिक्रोन भेरियन्टले खोपको दुवैमात्राबाट बन्ने एन्टिबडी जसले कोशिकालाई भाइरसबाट संक्रमित हुनबाट बचाउँछ त्यसलाई पनि परास्त गर्न सफल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्। तर फाइजर-बायोएनटेक वा मोडेर्नाको एमआरएनए भ्याक्सिनको तेस्रो डोजले हाम्रो शरीरमा एन्टिबडीहरूको संख्या विस्तार गर्छ। जसले कुनै पनि भेरियन्टलाई भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गराउन गाह्रो हुन्छ।
अध्ययनहरूका अनुसार एन्टिबडीको लामो उपस्थिति मानिसहरूलाई नयाँ भेरियन्टहरूबाट बचाउन प्रभावकारी साबित हुन सक्छ, चाहे तिनीहरू भाइरसको मूल संस्करणभन्दा जतिसुकै फरक किन नहुन।
सियाटलको फ्रेड हचिन्सन क्यान्सर रिसर्च सेन्टरका संक्रामक रोग चिकित्सक र इम्युनोलोजिस्ट डा. जुली म्याकिलराथले ओमिक्रोनजस्ता कुनै अर्को भेरियन्टको सम्पर्कमा मानिस आउन थाले उनीहरूलाई यससँग लड्न थप बल आवश्यक रहने बताइन्।